Sei Train Ride Yakanakisisa Way To See Italy | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Italia > Sei Train Ride Yakanakisisa Way To See Italy
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 20/11/2020)
Une mitoro zvaungasarudza kana wafunga sei kufamba. Kufanana zita yakakurumbira firimu, unogona kuenda Via ndege, nezvitima, uye nemotokari. Kana totaura nokutora kushanyira Italy, zvisinei – kune zvimwe zvinhu zvekuenda nechitima kukwira.
Dzidzisai BHIZA KUNYARADZA
mbudzana kunakidzwa chitima kukwira
Airline zvigaro dzine mukurumbira pfupi iri legroom, uye iwe hazvibvumirwi kushandisa zvemagetsi panguva yasimuka uye kumhara. Izvi zvinoreva kuti mapfupi ndege, iwe uri kugara kwako chigaro duku vakawanda kutiza pasina kuvhiringidzwa zvaipiwa smartphones uye Michina, this is really different from a train ride.
Cars kazhinji zvinopa zvishoma nzvimbo, asi vatasvi inogona nematambudziko uye vamwe vanhu vanotambura motokari chirwere – kunyanya pamusoro rwendo rurefu kana ungada kuverenga kana mitambo. kukwira chitima, pane rimwe divi, anotipa rokunyaradza zvigaro uye anotsvedzerera tasva – risina kumiswa maererano yasimuka refu uye kumhara nguva, zvakare chiitiko chakasiyana from a train ride.
Paaifamba nechitima atasve muItaly, unogona kuedza chaizvo rokunyaradza ergonomic zvigaro uye cabins itsva inzwi-proofed soro-nokukurumidza Frecciarossa 1000 chitima.
Naples kuGenoa Zvitima
Turin kuGenoa Zvitima
Rimini kuGenoa Zvitima
Siena kuGenoa Zvitima
Dzidzisai BHIZA MAONERO
Air kufamba inopa yevedza zvemuchadenga maonero, asi chete kwenguva pfupi nguva kusvikira ndege hunokwira kure kumusoro mumaruwa. Nepo freeways havasi kazhinji wakajeka, Migwagwa pakati pamaguta vanogona kupa naka maonero. zvisinei, mutyairi ane kunyatsotora mumugwagwa, saka chete vamwe vatakurwi anogona nokuwirirana rinopfungaira zvikomo kana yakanaka Ocean. Dzidzisai tasva kunoita zvose vafambi kunakidzwa runako kunze mahwindo.
Mumwe inzwai muri vanhu zvinhu vaifamba kuenda Italy rails sei naka chaizvo Chitima parwendo ravira.
Chitima nzendo mu Italy nonyanya akanaka so make sure you travel along the Cinque Terra between Levanto and La Spezia, kana rwendo pasi kumabvazuva kwemhenderekedzo kubva Rimini kuna Catane.
Dzidzisai Pataidzokera pakufamba iri zvikuru inokwanisika pane kubhururuka. Car Rental inogona mutengo-vanobudirira, asi kana iwe wedzera inishuwarenzi, gasi, uye nguva (zvimwe nguva kutyaira kunoreva zvakawanda usiku akkommodasie) rwendo wako unogona kuwana dzinodhura kutsanya. Munokwanisa kutora neusiku chitima tasva, kuti nzira imi kubhadhara pekugara uye zvifambiso mune rimwe.
Rimini kuna La Spezia Zvitima
kwezuva nguva pamusoro pamakomo
Zvitima emit kure zvishoma kabhoni choutsi than planes or cars. Maererano nokumwe kuongorora, mota dzinobuditsa kaviri huwandu hwe CO2 than trains do.
Planes munyanye Environmental Impact. Kana uchisarudza pakati kubhururuka kana kutora chitima, funga izvi: ndege vanoshandisa vakawanda vavo huni yasimuka uye kumhara. Nepo izvi evens pamusoro nokureba-refu dhonza ndege, zvinoreva zvakawanda mafuta paminiti kiromita rinoshandiswa kuti mapfupi ndege, vakadai sevatariri mukati Italy.
Kuwedzera kune izvozvo, vanhu vakawanda vanoenda airport nemotokari kana tekisi, achiwedzera zvimwe kabhoni choutsi kwavo zvachose. Izvi zvinoreva zvinoita zvakawanda kwezvakatipoteredza musoro kutora imwe intercity nechitima atasve pane pfupi ndege kana nemotokari.
Kunze peturu uye Diesel kushandiswa, kune ruzha uye kusvibiswa kwemhepo, uyewo kudiwa zvichimisa motokari mumaguta kare kuti kushayiwa mitema dzezvimwe.
Dzidzisai BHIZA VAKACHENGETEKA
Kana kuyera fatalities por mutakurwi-maira, zvinobhururuka nani zvikuru pane kutyaira. Chikonzero: pane zvishoma mukana kukanganisa kwevanhu, uye zvakanyanya kunetsa kuve mutyairi pane kuwana rezinesi rekutyaira. Kufungawo mugwagwa ezvinhu uye kuneta pamusoro refu Zvifambiso, zviri nyore kuona kuti nei uchisarudza ndege nani kupfuura motokari.
Zvichienzaniswa nezvitima, zvisinei, ndege havasi chaizvo sezvo njodzi. Zvitima munzira njanji pa nomumugwagwa kwaitora nguva aimhanya, zvinoreva kune zvishoma mukana nokukoromoka zvichienzaniswa ndege. Panyaya yekukanganiswa, ari nomumugwagwa kwaitora nguva aimhanya zvinorevei zvishoma ngozi.
Florence kuna Rimini Zvitima
Rome kuna Rimini Zvitima
Milan kuna Rimini Zvitima
Venice kuna Rimini Zvitima
Avhareji Freeway mukoto kunoita pamusoro 2,500 vanhu paawa – apo randinenge chitima mutsetse anogona kutakura 50,000 vanhu paawa. Izvi zvinoita nechitima Pataidzokera kufamba substantially anokurumidza kupfuura kutyaira, kunyanya kana iwe chinhu anononoka-zvinofamba motokari, mira migwagwa, motokari mwenje zvisingadzivisiki zvakaipa majana. Pamusoro pe izvozvo, mutyairi ane pfungwa mumugwagwa, saka vanenge vasingakwanisi kuverenga, kudzidza, hope, kana kushanda.
Flying refu marefu zvingaita kudarika achifamba nechitima, asi nokuda pfupi akareba, nendege haiponesi nguva. Chekutanga, unofanira kuenda yendege – Kazhinji rakamiswa kure dzinogarwa munzvimbo. Iwe zvakare unofanirwa kuve uriko kweinenge awa usati watora nguva yekutora-kupinda uye kuburikidza nekuchengetedzeka. Kana iwe cheki mukwende, uchaita vanofanira kumirira panguva carousel. Uye kuti zvose pamberi chero ndege sokunonoka kana kufamba kana bhazi pakati yendege zviteshi uye masuo.
zuva uye chiteshi
Airports kazhinji rakamiswa kunze kweguta, zvichireva kamwe iwe nenyika, iwe unenge uchiri kuda kutora motokari, bhazi, kana kudzidzisa kupinda muguta. Panyaya kuona zvisakamboonekwa, Migwagwa iri nzvimbo guta kunogona congested uye Zvakaoma kuwana nemotokari, saka akatora chitima anoita zvakawanda mupfungwa mu mumaguta.
Kutarira kutenga nechitima atasve matikiti pasina Réservation yechikoro? kushanya SaveATrain.com tO kuwana yakachipa pashiri chitima prices.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/why-a-train-ride-is-the-best-way-to-see-italy/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)